वामदेव हैन धनबहादुर बुढानै सांसद हुनुपर्छ भन्दै राजीनामा नदिन डोल्पावासीले दिए दबाब !
भदौ १३, २०७५ BNNTV
काठमाडौँ, डोल्पाबाट विजयी पर्यटन राज्यमन्त्री धनबहादुर बुढालाई सांसद पदबाट राजिनामा गराएर नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचन मार्फत संसद्मा ल्याउने तयारी भइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष सम्पन्न भएको चुनावमा बुढा एमाले पार्टीबाट भारि मतान्तरका साथ निवाचित भएका थिए।
पार्टीलेनै सांसद पदबाट राजीनामा दिन लगाएर उपनिर्वाचन गराउन लागे पछि बुढा पार्टीको म्यान्डेट बोकेर मतदातालाई भेट्न गृहजिल्ला पुगेका बुढालाई राजीनामा नदिन मतदाताले चेतावनीनै दिएका छन्।
राजिनामा दिने मनस्थितिमा सोमबार डोल्पा पुगेका राज्यमन्त्री बुढालाइ मतदाताले कम्तीमा पनि अबको ६ महिनासम्म राजीनामा नदिन सुझाव दिएका छन्। हामीले भरि मतले जिताएर र तत्काल राजिनामा नदिन स्थानियले सुझाव दिएका छन् । स्थानिय जनताको लागी बुढानै नेता हुन् र अहिलेनै राजीनामा दिएर जनताको मतको अपमान नगर्न पनि आग्रह गरेका छन।
त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा भएको एक भेटघाट कार्यक्रमा राज्यमन्त्री बुढाले वामदेव र धनबहादुरलाई जिताउनुमा कुनै फरक नभएको बताए।
बुढाले आफुले राजिनामा दिएर पनि कुनै असर नपर्ने र डोल्पाको जनताले बामदेव गौतमलाइ भोट हाल्नु पर्ने हुन सक्छ र डोल्पाको लागि विकासको ९० प्रतिशत काम वामदेव गौतमबाटै हुन्छ, उहाँ पनि देशको उच्च नेता हो।’ राज्यमन्त्री बुढाले मतदाताको आकांक्षा र पार्टीका कार्यकर्ताको भावनाअनुसार आफूले निर्णय लिने बताए।
प्रकाशित : बुधबार, भदौ १३, २०७५१२:२८
निर्मला हत्याकाण्ड विरुद्ध कलाकारहरुले पोखे यस्तो आक्रोश, कसले के भने?
डा. केसी अनसन बसेको अस्पतालमा चल्यो गोली: एक जना प्रहरीको छातीमा गोली लाग्यो
प्रदेश नं ३ को सभामुखमा श्रेष्ठ निर्विरोध
प्रदेश नं ७ : सभामुखको निर्वाचन कार्यतालिका प्रकाशन